Hetsi-pahatsiarovana Bisikileta Fotsy Ao Orogoay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2014 9:35 GMT
Vakio amin'ny teny English, 日本語, русский, Deutsch, Español
Tsy zava-baovao ity hetsika ity, satria efa nandray anjara tamin'ny tetikasa tahaka izany ireo tanàna 200 manerantany. Ao Orogoay, napetraka tamin'ny 27 Aprily 2014 ny moto matoatoa voalohany, ho fahatsiarovana an'i Natalia Mastroianni[es], mpitondra bisikileta 22 taona izay voadonan'ny fiara tao amin'ny araben'i Rambla, akaikin'ny fihaonan-dalana ao amin'ny tetezana Carrasco, ao Montevideo tamin'ny Aogositra 2009.
Ny hetsika Bicicletas Blancas [es] dia natsangan'ny Ciclovida [fihodinam-piainana], fikambanana mampiroborobo ny fampiasana bisikileta sy ny kolontsain'ny lalana, ary fomba iray hisarihana ny saina manoloana ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa sahaza ny bisikileta.
Nanatona ireo manampahefan'ny governemanta ao amin'ny Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev)(Sampam-piarovam-pirenena misahana ny Lalana ao Orogoay; es) ny Ciclovida mba hanomboka fiaraha-miasa hampiroboroboana ny fampiasana bisikileta sy ny fanajana ireo fitsipika mifehy ny lalam-pifamoivoizana. Tanjon'izy ireo ihany koa ny hanentana mikasika ny hafatra hoan'ny vahoaka, “Fifamoivozana avokoa isika rehetra”, izay manome toro-lalana hoan'ireo saofera sy mpitondra bisikileta mikasika ny tokony atao eny amin'ny toeram-pifamoivozana iombonana.
Tamina lahatsoratra nivoaka tamin'ny 26 mey tao amin'ny gazety Espaniola mpivoaka isan'andro El País [es] mikasika ireo bisikileta matoatoa hafahafa nitandahatra tamin'ny andry ao amin'ny araben'ny tanàna, naneho hevitra ny mpandrindran'ny Ciclovida, Gustavo hoe “Mampidi-doza ny lalana natokana hoan'ny bisikileta eny amin'ny Oniversite.”
Na dia efa nanmetraka bisikileta fotsy roa aza ry zareo tao la Rambla – ka ny faharoa dia tao Rambla y Belastiquí ho fahatsiarovana an'i Washington González [es], mpitondra bisikileta 68 taona izay namoy ny ainy tamin'ny 8 Marsa 2014 – dia maro ireo olona mbola tsy mahafantatra ny fisian'ny hetsika, araka ny abaribarin'ireo fanehoan-kevitra ao amin'ny media sosialy.
Miombo-kevitra avokoa ireo fanehoan-kevitra tao amin'ny Twitter, tahaka ny an'i Laura Lion (@LauraLionGu), miasa amin'ny fizahan-tany ity:
Manontany ny dikan'ny bisikileta aho. Ity ny valinteny http://t.co/WS2d3fjfHH @elpaisuy
Ho azy kosa, manontany ireo mpitondra bisikileta sy ny fihetsik'izy ireo eny an-dalana i Cesar A. Martínez (@CesarAMartinezR):